Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 15aad | Jowhar Somali News Leader
Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 15aad
Sidii aya ay telka ku demisay markiina waxaa u soo gashay Yaasmiin oo ku tiri Aabe ayaa ku wacayo Falis cabsi xoogan ayaa gashay waxaa loo sheegay in odoyga uu qolkiisa ku jiro markiibana waa u gashay Aabe Warsame oo taagan ayaa ku yiri.
Soo gal ee fadhiiso
Falis amarkii ayaa ay qaadatay oo inta ay hore u soo gashay ayay kursi u dhawaa ku fadhiisataya
Jinniyada ku haayey ma kaa dageen
Aabe aniga Jinniyo ima haayaan ee Qadar ayaa aniga xumaanta ila daba socda
Maya Aabe Qadar waa uu saxan yahay ileyn adiga ayaa la dhashay oo raga derbiyada la taagan kaalay miyaadan xishooneynin ma ogtahay in sharafka hablaha ay ku jirto gurigooda oo dariiqyada ay ceeb tahay.
Falis wax ay sheegto ayay la’dahay madaxa in ay ruxda oo kaliya ayaa ay warka ku soo koobtay aabe Warsame oo hadalka sii wata ayaa ku yiri.
I maqal Falis annaga adiga ayaan wanaag kula rabnaa sharafka sidiisaba lacag xataa laguma keeno ee qofka isaga ayaa laga rabaa in wixii karaamo xumo u horseedayo inuu ka waantoobo NInkaas Yaasiin la yiraahdo magaciisa xataa ma maqli karo mana la kulmi kartid sidoo kale gurigaan deyrka uu ku leeyahay banaankana ma dhaafi kartid ma maqashay.
Haddii ay dhacdo in aniga wax I karaamo tirayo aad fashana ama aad nacaskaas wadada ka raacdo ogow in aan kala dhimanay gurigaan iyo familkaan iska ilaaw maalintaaas sharaf ayaan kula rabaa ee adiga cagga dhigo.
Waad bixi kartaa hooyadaana ii wac
Falis oo neef weyn ka soo baxday ayaa soo baxday oo hooyadeed u yeertay markii ay u soo gashay Yaasmiin oo weli halkii fadhisa ayay in cabaar ah aamustay oo markii mudo juuq laga waayey ayay u sheegtay in loo soo digay oo kaliya waxayna Yaasmiin kula talisay walaasheed in ay gebi ahaan jaceylka Yaasiin iska ilaawdo balse looma jawaabin oo waalaga sii jeestay.
Hooyo Maryan markii ay xaajiga u tagtay ayuu u sheegay in hadal ay meel dhigteen isaga iyo Falis ayna deyrka guriga iska fadhiisan karto walow aan xaajiyada arrinkaan ku farxin hadana Xaaji Warsame ayaa ka dhaadhicyey in gabadha aan cadaadiska laga badin isaga ayaa ku yiri aniga ayaa Qadar la hadlayo.
Falis xuriyadii yareyd ee la siiyey ayay isaga naaloneysay mana aysan heysan fursad ay Qadar kula kulanto hadana xilli kasta telefoonka ayaa ay iska maqli jireen.
Mursal lug xerka lagu sameeyey Falis ayaa fursad u aheyd oo uu habeen kasta ku arki jiray oo deerka gurigooda ku wada sheekeysan jireen walow Yaasmiin ay la joogtay Aadamna mararka qaar uu u imaan jiray.
Falis maad maadashadii Qadar ayay ku jirtay Saaxiibkeed mudo labo habeen ayay si sir ku kulmeen hadana cid ogaaday ma jirin xataa Yaasmiin uma sheegin ileyn Yaasiin ayaa sidaa ka codsaday.
Fursadii ugu weyneyd manta ayay u soo baxday markii xilli galab ah Hooyo Maryan loo soo sheegay in walaalkeed Geesey oo dekada Xamaali ka ahaa geeri lama filaan ah ku timid kadib markii uu salaadii Casir oo soo tukaday uu misaajidka iridiisa uu ku dhacay.
Nafta ku deysay mar kaliya ayaa reerka oo dhan wada carareen oo xaafadii reer Geesey oo Kaawo Godey ku taalay la wada aaday waxaana la isku raacay in meydka lagu aaso tuuladii uu ku dhashay oo ay hooyadiis ku nooleyd waxaana la isku raacay in beri salaada subax meydka la qaado Qadar Aabahiis iyo Hooyadiis.
Waa is wada raaceen waana ay hubtay in aan laga soo hoyan Karin waxayna tani fursad siisay in caawa kulan cabsi aan ku jirin in ay la kulanto Saaxiibkeed sidii ayay isku balansadeyn.
Falis habeenkii markii uu gabalka dumay ayay is diyraarin gashay Yaasmiin waa ogeyd in ay Yaasiin la balansan tahay oo isla habeenkii ayaa lagu wargeliyey.
Dhinaca kana Yaasmiin habeenkaas waxa ay ka mid aheyd habeenada ay banaanka u soo fadhiisato Mursal oo ay kulmayaan iyaga oo deyrka guriga wada fadhiyaan ayaa ay soo baxday Falis waxaana salaam la’aanteeda ka yaabay Mursal oo ku yiri.
Haye Falis salaam ma jirto
Caawa oo kale ha ii qaban balse anoo imaan ha bixin
Ha ye haye waan ku arkaa dabeysha ayaa ku sidata caawa
Kii Yaasiin ahaa ayaa ay la kulmeysaa waxa uu ku noqday mowjad sidata illaahay ha xafido walaahi waan u baqaa.
Iyada waa qalbi nadiif inshah allah midkii xumeeya illaahay kama yeelo
Previous articleSheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 14aad
Next articleDhul gariir xooggan oo ku dhuftay xadka u dhaxeeya Iiraan iyo Ciraaq